Search ပါကင်လေးများ - BajarFB.com
Search Results - ပါကင်လေးများ
အပျိုစစ်​ ပါကင်​​ဖောက်​ကြစို့ ...
အပျိုစစ်​ ပါကင်​​ဖောက်​ကြစို့ ... Min Myat Ko Ko 28 Sep 2019 · 5.1K views
LUOJIA 110cc 2018 လမြင့်​ လိုင်​စင်​အရှင်​ပါ ၆၆ယ ဘီးဒိတ်​နဲ့မလိုက်​​အောင်​လှတယ်​သစ်​တယ်​ ၄သိန်း၈သောင်း ပါကင်​​ဖောက်​မယ်​တိုရှိတယ်​ ပြစ်​ဆီးစုံပါမယ်​🙏 အင်​ဂျင်​ပါကင်​ တရုပ်​မ​လေး ​ဈေးနဲ့ ဘီး ရှယ်​ဖြစ်​​နေရမယ်​ 09884447407 ​မြောက်​ဒဂုံ Ygn.
LUOJIA 110cc 2018 လမြင့်​ လိုင်​စင်​အရှင်​ပါ ၆၆ယ ဘီးဒိတ်​နဲ့မလိုက်​​အောင်​လှတယ်​သစ်​တယ်​ ၄သိန်း၈သောင်း ပါကင်​​ဖောက်​မယ်​တိုရှိတယ်​ ပြစ်​ဆီးစုံပါမယ်​🙏 အင်​ဂျင်​ပါကင်​ တရုပ်​မ​လေး ​ဈေးနဲ့ ဘီး ရှယ်​ဖြစ်​​နေရမယ်​ 09884447407 ​မြောက်​ဒဂုံ Ygn. Zwe Htet Paing6Sep 2020 · 2.8K views
ကား ပါကင် ထိုးနည်း
ကား ပါကင် ထိုးနည်း K.A Car Rental Service 21 Jun 2018 · 1.5K views
ပါကင် ဘယ်လိုလုပ်လဲ အိမ်သုံး အသေးစား တပိုင်တနိုင်လုပ်သူတွေ အတုယူစေဖို့ လေ့လာပါ
ပါကင် ဘယ်လိုလုပ်လဲ အိမ်သုံး အသေးစား တပိုင်တနိုင်လုပ်သူတွေ အတုယူစေဖို့ လေ့လာပါ U Kyaw Tun 22 Nov 2020 · 582 views
Honda Shadow 400cc 2006 ကပ်​​သော့ အင်​ဂျင်​ပါကင်​နဲ့ ဂျပန်​ပုံးဘီးရှယ်​ ​ရှေ့​နောက်​တာယာအပြည့်​ နဲ့ဘီးအသစ်​လိုဆီးရမယ်​ ​အော်​ကီလို့နဲမယ်​ japanဂွထုပ်​ပါမယ်​ Honda Shadow ​အော်​ကပ်​သ​လောက်​ပါမယ်​ အင်​ဂျင်​သံ​လေသံပဲရှိမယ်​ ​ပေးရတဲ့​ဈေးနဲ့ပြန်​ရမဲ့ဘီး​ရဲ့​ကြော်​နဲ့ဘီးရဲ့ရုပ်​ Ygn ​မြောက်​ဒဂုံကပါ ဘီးအတွက်​၁နှစ်​အာမခံနဲ့​ရောင်း​ပေးမယ်​ မြန်​မာပြည်​မှာစီးထားချင်​ပြူထားချင်​မရှိတဲ့ဂျပန်​ပုံးအ​ပေါ်ဘီးရှယ်​ နယ်​ကချစ်​ညီကိုများလဲအာမခံဖြစ်​ကားဂိတ်​အ​ရောက်​ပို့​ပေးပါတယ်​ Call09884447407 အဲဖုန်းတစ်​လုံးပဲတုံးပါတယ်​ 🙏
Honda Shadow 400cc 2006 ကပ်​​သော့ အင်​ဂျင်​ပါကင်​နဲ့ ဂျပန်​ပုံးဘီးရှယ်​ ​ရှေ့​နောက်​တာယာအပြည့်​ နဲ့ဘီးအသစ်​လိုဆီးရမယ်​ ​အော်​ကီလို့နဲမယ်​ japanဂွထုပ်​ပါမယ်​ Honda Shadow ​အော်​ကပ်​သ​လောက်​ပါမယ်​ အင်​ဂျင်​သံ​လေသံပဲရှိမယ်​ ​ပေးရတဲ့​ဈေးနဲ့ပြန်​ရမဲ့ဘီး​ရဲ့​ကြော်​နဲ့ဘီးရဲ့ရုပ်​ Ygn ​မြောက်​ဒဂုံကပါ ဘီးအတွက်​၁နှစ်​အာမခံနဲ့​ရောင်း​ပေးမယ်​ မြန်​မာပြည်​မှာစီးထားချင်​ပြူထားချင်​မရှိတဲ့ဂျပန်​ပုံးအ​ပေါ်ဘီးရှယ်​ နယ်​ကချစ်​ညီကိုများလဲအာမခံဖြစ်​ကားဂိတ်​အ​ရောက်​ပို့​ပေးပါတယ်​ Call09884447407 အဲဖုန်းတစ်​လုံးပဲတုံးပါတယ်​ 🙏 Zwe Htet Paing6Jun · 131 views
အလန်းစားကား ပါကင် ထိုးနည်းများ MoeZac Auto Myanmar 17 Apr 2019 · 917K views